समाचार – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on धरानका मेयर जब झाडु लिएर सडकमा उत्रिए…
धरान : धरानलाई सफा र सुन्दर सहर बनाउने अभियान सुरु गरेका धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई (सम्पाङ) आफै झाडु लिएर सडक सरसफाइ अभियानमा जुटेका छन् ।
धरानमा मुसलधारे वर्षा रोकिने वित्तिकै बिहीबार मेयर राईले धरानको मुख्य बजार रहेको भानुचोक र बसपार्क क्षेत्रको सरसफाइ गरे।
मेयर आफैं झाडु लिएर बजार सरसफाइमा निस्किएपछि उनलाई उपमहानगरपालिकाका सफाइ कर्मचारी, नगर प्रहरी, स्थानीय बासिन्दा र विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले साथ दिए । सफा र सुन्दर सहरको पुरस्कार पाउने धरान पछिल्लो समय दुर्गन्धित हुँदै गएपछि आफूले सरसफाइ अभियान संचालन गरेको मेयर राईले बताए ।
मेयर साम्पाङले भानुचोकको सार्बजनिक शौचालयको समेत निरीक्षण गरेका थिए । उनले सार्वजनिक शौचालय आसपासमा समेत दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै आइन्दा फोहोर नगर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले बसपार्कमा जथाभावी फोहोर नफाल्न यातायात मजदुरलाई आग्रह गर्दै धरानलाई सधै सफा राखे यहाँ आउने पर्यटकहरुले आहा! धरान भनेर प्रंशसा गर्न लायकको बनाउन धरानबासीलाई आग्रह गरे।
बुधबार धरानको सर्दु खोलामा रहेको खानेपानीको मुहान मर्मत गरी पानी वितरण व्यवस्थित बनाउन खटिएका मेयर राईले कुर्सीमा बसेरभन्दा फिल्डमा खटेर धरानको समस्या समाधान गर्न आफू निरन्तर लागिरहने बताए ।
उनले कुर्सीमा बसेर धराने जनताको समस्या हल नहुने भन्दै धरानका २० वटै वडामा पालो मिलाएर जनसरोकारका विषयको अनुगमन गर्ने बताए ।
मेयर साम्पाङले नगरपालिकामा बसेरभन्दा दैनिक प्रत्येक सडकको अवलोकन गर्ने र खाल्डाखुल्डी भेटिए तत्काल मर्मत गरी यातायातका साधन संचालनमा सहज पुर्‍याउने बताए।
जनसरोकारका विषयमा मेयर आफै खटिएपछि धरानको विकासमा आमुल परिवर्तन हुने धरानवासीले अपेक्षा गरेका छन् । धरान १५ का यातायात व्यवसायी देवेन्द्र कार्कीले धरानका मेयरको कामले धरानवासीमा आशा पलाएको बताए ।
‘यस अगाडिका जनप्रतिनिधिहरु आर्थिक अनियमितताका घटनामा मुछिएका थिए । तर, धरानमा नयाँ मेयर आएपछि धरानको विकास र समृद्धिले नयाँ फड्को पार्नेमा आशावादी छौं,’ कार्कीले भने ।
No Comments on गाँजा प्रतिबन्ध फुकाउन संसदमा उठ्यो जोडतोडको आवाज, विधेयक पारित प्रक्रियामा
काठमाडौं । गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न नेपालको संसदमा फेरी कुरा उठेको छ ।
२०७६ फागुन १९ गते नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले संसदमा पहिलो गैर सरकारी विधेयकका रुपमा गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराउनुभएको थियो ।
उक्त विधेयक पारित गराउन आजको संसदमा उहाँले बोल्नुभएको छ ।
उहाँले नेपाली युवाहरुलाई हरियो पासपोर्ट बोकेर विदेश पठाइरहेका युवाहरुलाई हरियो गाँजाको बिरुवा बोकाएर गाउँमा रोप्न पठाउँने हो भने विश्वभरीको पैसा नेपालमा आउँने बताउनुभयो । यो यही सरकारले विधेयक ल्याओस् भन्नुभयो ।
उहाँले विधेयक दर्ता गराएपछि केही महिना अघि गृह मन्त्रालयले नेपालमा गाँजा खेतीसम्बन्धी अवधारणापत्र तयार पारेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार औषधिजन्य प्रयोग र अनुसन्धानका लागि गाँजा खेती खुला गर्ने तयारी सरकारको समेत छ ।
मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाअन्तर्गत रहेको लागुऔषध नियन्त्रण शाखाले अवधारणापत्र माथि काम गरेको हो। यसअघि औषधीय प्रयोजन लागि गाँजा खेती गर्न पाइने गरी कार्यविधि ल्याउने तयारी भएको थियो।
कार्यविधि पर्याप्त नहुने देखिएपछि अवधारणापत्र तयार पारेको अधिकारीहरू बताउँनुहुन्छ ।
नेपालमा गाँजा खेतीका सम्भावना र चुनौती कस्ता छन् ?
के नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन सम्भव छ ? पुरानो ऐनको साँघुरो घेरामा टेकेर कार्यविधि बनाउनुभन्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन्धिलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई ध्यानमा राख्दै विधेयक नै बनाउने कि भन्ने निष्कर्ष रह्यो।
यसअघि गाँजा खेतीका लागि विधेयक तयार भएको भन्ने विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। अवधारणापत्र मात्र तयार गरेका हौँ। सरकारी विधेयक बनाउने बारे छलफल चलेको छ ।
के छ अवधारणापत्रमा ?
गाँजा खेतीसम्बन्धी उक्त अवधारणापत्रमा गाँजाको नियन्त्रित उत्पादन, विक्री तथा वितरण, निर्यात कहाँ र कसरी गर्नेजस्ता विषय उल्लेख गरिएको अधिकारीहरूको भनाई छ ।
हाम्रो परिवेशमा गाँजालाई औषधीय र अनुसन्धान प्रयोजनका लागि खुला गर्न सकिने कारणहरू, कतिपय देशमा भएका अध्ययनको नतिजा, यसलाई कसरी र किन खुला गरिएको छ भन्ने उदाहरण पनि समेटेको छ ।
गाँजालाई नियन्त्रित ढङ्गले खुला गर्ने विधेयक बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति आवश्यक भएकाले अवधारणा पत्र तयार पारिएको हो ।
किन आवश्यक छ नयाँ कानुन ?
सन् १९६१ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सिङ्गल कन्भेन्शन अन नार्कोटिक ड्रग १९६१ पारित गरेको थियो। जसले गाँजालाई लागुऔषध मान्दै प्रतिबन्ध लगायो।
अहिले गाँजाको खेती, भण्डारण, सेवन र विक्री वितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय अपराध मानिन्छ । पाँच पटक संशोधन भइसकेको सो ऐनले २५ बोट गाँजा खेती गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ३,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ।
सोभन्दा बढी खेती गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ५,००० रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ। उक्त ऐनअनुसार ५० ग्रामसम्म गाँजा राखे तीन महिनासम्म कैद र ३,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। सोही कानुनमाथि टेकेर गृह मन्त्रालयले गाँजा खेती खुला गर्ने कार्यविधि बनाउने बताएको थियो।
तर २०३३ सालको उक्त ऐनले गाँजालाई अनुसन्धान प्रयोजनका लागि खुला गरे पनि अनुसन्धानपछि के गर्ने र केका लागि अनुसन्धान गर्ने भन्ने प्रष्ट नभएको जानकारहरू बताउँछन्।
ऐन बनेको वर्षौँ बित्दा पनि त्यसको कुनै काम अघि बढेन। अहिले आएर पूरानै ऐनमा टेकेर कार्यविधि ल्याउने वा नयाँ विधेयक ल्याउने भन्ने छलफल पछि, अलग विधेयक ल्याई नयाँ कानुन बनाउने निष्कर्षमा पुग्यौँ, महाशाखा प्रमुख भुसालले भन्नुभयो ।
कानुनी प्रतिबन्ध हटाउन संसद्‌मा प्रस्ताव समेत दर्ता भयो। यस विषयको पक्षमा सांसद शेरबहादुर तामाङ, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडालगायतले खुलेर पैरवी गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूले गाँजा खेती र व्यापारबाट कृषक र राष्ट्रलाई आर्थिक फाइदा हुने बताउँदै आउनुभएको छ ।
No Comments on गुगलमा बिर्सेरपनि यी शब्द सर्च नगर्नुहोस् : नत्र जेल पुर्याउनेछ
काठमाडौं । गुगल हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुन्छ । यो एक धेरै लोकप्रिय सर्च इन्जिन हो । हामी गुगलमा धेरै कुराहरू खोज्छौं ।
धेरै जानकारी गुगल खोज मार्फत उपलब्ध हुन्छ । तर, यसमा खोजी गर्दा केही कुरामा अवश्य ध्यान दिनुपर्छ ।
गुगलमा बिर्सेर पनि सर्च गर्न नहुने धेरै कुराहरु छन् । यसले तपाईंलाई समस्यामा मात्र नभई जेलको ढोकासम्म पुर्याउन सक्छ ।
अर्थात् गुगल सर्च गर्दा पनि केही कुराको ख्याल गर्नुपर्छ । गुगलमा केही कुराहरु खोज्दा तपाईं नजानेर पनि फस्न सक्नुहुन्छ ।
त्यसैले यहाँ हामी तपाईंलाई ती चीजहरूको बारेमा बताइरहेका छौं, जुन तपाईंले खोज्न हुँदैन् ।
बम कसरी बनाउने
गुगलमा बम कसरी बनाउने भनेर खोजी नगर्नुहोस् । अर्थात् यो कुञ्जी (किबोर्ड) शब्द बिर्सेर पनि गुगलमा सर्च गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा तपाई समस्यामा पर्न सक्नुहुन्छ । धेरै पटक, प्रयोगकर्ताको यो खोजको कारण, तिनीहरू सुरक्षा निकायको रडारमा आउँछन्।
विश्वभर चाइल्ड पोर्नलाई लिएर निकै कडा कानून छ । अर्थात्, यसको सीधा अर्थ हो कि यदि तपाईंले चाइल्ड पोर्न खोज्नु भयो भने, तपाईंले जेल पनि जानु पर्ने हुन सक्छ । चाइल्ड पोर्न खोज्नु तपाईंको लागि भारी हुन सक्छ।
गर्भपतन बारे जानकारी
नेपालसहित दुनियाँमा धेरै देशहरुमा गर्भपतनसम्बन्धी कडा कानून छ । यस कारण, तपाईं यसलाई खोज्दा समस्यामा पर्न सक्नुहुन्छ । भविष्यमा यस्ता चीजहरूको खोजी नगर्नुहोस् ।
बैंकको ग्राहक सेवा नम्बर
धेरै पटक मानिसहरूले गुगलमा बैंकको ग्राहक सेवा नम्बर खोजेर कल गर्छन् । तर, एउटा घोटाला चलिरहेको थियो, जसमा ह्याकरहरूले गुगल सर्चमा गलत नम्बरलाई माथि राख्छन् ।
जसकारण प्रयोगकर्ताले यो नम्बरमा कल गर्दा आर्थिक ठगी हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकको आधिकारिक वेबसाइटबाट ग्राहक सेवा नम्बरको जानकारी लिनु धेरै राम्रो हुन्छ ।
No Comments on एम्बुलेन्स घरभित्र पसेपछि सुतिरहेका एक वृद्धाको मृ”त्यु
सिन्धुपाल्चाेक । लामोसाँघु–जिरी सडकखण्डको दुईकिलोमा एम्बुलेन्स दुर्घटनामा परी एक वृद्धाको मृत्यु भएको छ । गए राति खाडीचौर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित बा२०च ६३२७ नंको एम्बुलेन्स दुर्घटनामा परेको हो ।
काठमाडौं। भारतीय अभिनेता सलमान खान यही जेठ १४ गते काठमाडौं आउने कार्यक्रम तय भएको थियो ।तर, अन्तिम समयमा आएर उनको कार्यक्रम स्थगित् भएको जानकारी आएको छ । सलमानका नेपालथित् फ्यान अहिले निराश छन् । खान काठमाडौंमा प्रस्तुत गर्ने भनिएको कन्सर्टमा सहभागी हुन नेपाल आउने चर्चा थियो ।
उनको नेपाल आगमनको लागि नेपाल सरकारका पर्यटनमन्त्री प्रेम आले नै सक्रिय भएका थिए । उनीहरुबीच फोन भिडिओमार्फत कुराकानी पनि भएको थियो । सलमानको काठमाडौंमा हुने भनिएको कार्यक्रमको आवश्यक तयारीका लागि उनका भाइसमेत काठमाडौं आएका थिए । उनले पनि पर्यटनमन्त्री आलेसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
दबंग टुर रिलोडेडका लागि सलमान ओडीसी इन्टरटेनमेन्टको आयोजनामा हुने कार्यक्रमका लागि नेपाल ल्याउने भनिएको थियो । तर, सलमान सहभागी हुने कार्यक्रमको टिकट पनि उत्साहजनक रुपमा वितरण नभएको बुझिएको छ । अहिलेसम्म ७ लाख रुपैयाँको मात्रै टिकट वितरण भएको स्रोतको दाबी छ ।
कार्यक्रम केरकति कारणले स्थागित भएको हो भन्नेबारे आयोजकले आधिकारिक रुपमा जानकारी नदिएपनि उनी सहभागी कार्यक्रममा टिकट राम्रोसँग विक्रि नहुनु, कार्यक्रमको लागि नेपाल ल्याउने भनिएको सामान भन्सारमा रोकिनु आदी रहेको बुझिएको छ । आयोजकले सलमान सहभागी हुने उक्त कार्यक्रमबाट ८ देखि ९ करोड रुपैयाँ उठ्ने विश्वास लिएको थियो ।
उक्त कार्यक्रमको प्रचारप्रसारको लागि आयोजकले अहिलेसम्म २ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको पनि बुझिएको छ । आयोजकले सलमानलाई ४ करोड ४० लाख खर्चिएर नेपाल ल्याउन लागेको थियो । त्यसवापत आयोजकले खानलाई ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको आयोजक संस्थाका एक सदस्यले जनाए ।
यो म्यादी सरकार होः ओली
No Comments on यो म्यादी सरकार होः ओली
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकार म्यादी भएको बताएका छन् ।बिहीबार संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै ओलीले शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई म्यादी सरकार भएको बताएका हुन् ।
अध्यक्ष ओलीले महाभारतमा पाण्डपहरुसँग सबैकुरा हुँदाहुँदै पनि सकुनी र मन्थराको षड्यन्त्रमा सत्ता खोसिएको कथा सुनाउँदै आफ्नो सत्ता पनि त्यसरी नै खोसिएको बताए ।
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको माध्यमबाट राष्ट्रको भविष्यलाई अध्याँरो सुरुङतर्फ धकेल्ने प्रयास भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाकाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले यस्तो बताएका हुन्। गत मंगलबार प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै ओलीले जस्तो निर्वाचन हुनपर्ने हो त्यस्तो नभएको बताए।
‘निर्वाचन जस्तो हुनुपर्थ्यो त्यस्तो भएन। निर्वाचन भयो, एउटा खुसीको कुरा हो। तर, जस्तो निर्वाचन हुनुपर्थ्यो त्यस्तो भएन्,’ उनले भने, ‘परिणाम त्यस्तो प्रकट हुन पाएन। किनभने जनताले त्यसरी परिणाम प्रकट गर्न पाएनन्।’
उनले संविधान, लोकतन्त्र र मानव अधिकारलाई नै निर्वाचनले अध्याँरो सुरुङतर्फ लगेको टिप्पणी गरे। ‘यस निर्वाचनको माध्यमबाट हाम्रो संविधान, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, मौलिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रको भविष्यलाई अध्याँरो सुरुङतर्फ धकेल्ने प्रयास भयो,’ ओलीले भने।
जसलाई जिल्लाबाट लखेट्ने धम्की दिए, उसैसँग सपथग्रहण !
No Comments on जसलाई जिल्लाबाट लखेट्ने धम्की दिए, उसैसँग सपथग्रहण !
काठमाडौं। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि व्यास नगरपालिकाका प्रमुखका उम्मेदवारको रुपमा रहेका वैकुण्ठ न्यौपानेले मतगणना सुरु नगरेको भन्दै वैशाख ३१ गते कांग्रेसविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेलाई लखेट्ने चेतावनी दिएका थिए ।
उनले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अगाडि भनेका थिए, “निर्वाचन आयोगमा के लेखेर पठाएको छ ? हामीलाई देखाउनुप¥यो । षड्यन्त्र गर्ने हामीविरुद्ध, अनि टिकौला तिमीहरु ? यहाँ कोही टिक्न सक्छ कांग्रेस हो यहाँ, हामीले धेरै मान्छे लखेटेका छौं, लखेटिन सक्छौ ।”
उत्तेजक भाषण दिदै मुख्य निर्वाचन अधिकृत हरिशचन्द्र ढुङगनालाई जिल्लाबाट लखेट्ने धम्की दिएका न्यौपाने मेयरमा निर्वाचित भएपछि उनै अधिकृतबाट बुधबार शपथग्रहण लिएका छन् ।
मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपकराज जोशीलाई पराजित गदै मेयरमा पुनः निर्वाचित न्यौपानेले शपथग्रहण लिदै संविधान र कानूनको पालना गरेर काम गर्ने बताए ।
त्यस्तै न्यौपानेले नगरवासीका चाहनालाई स्रोत र साधनको परिधिभित्र रहेर पूरा गर्नेतर्फ दत्तचित्त भएर लाग्ने बताए ।
सलमान खान नआउने, तीन करोडभन्दा बढि रकम स्वाहा !
No Comments on सलमान खान नआउने, तीन करोडभन्दा बढि रकम स्वाहा !
काठमाडौं। भारतीय अभिनेता सलमान खान यही जेठ १४ गते काठमाडौं आउने कार्यक्रम तय भएको थियो ।तर, अन्तिम समयमा आएर उनको कार्यक्रम स्थगित् भएको जानकारी आएको छ । सलमानका नेपालथित् फ्यान अहिले निराश छन् ।
खान काठमाडौंमा प्रस्तुत गर्ने भनिएको कन्सर्टमा सहभागी हुन नेपाल आउने चर्चा थियो ।उनको नेपाल आगमनको लागि नेपाल सरकारका पर्यटनमन्त्री प्रेम आले नै सक्रिय भएका थिए । उनीहरुबीच फोन भिडिओमार्फत कुराकानी पनि भएको थियो ।
सलमानको काठमाडौंमा हुने भनिएको कार्यक्रमको आवश्यक तयारीका लागि उनका भाइसमेत काठमाडौं आएका थिए । उनले पनि पर्यटनमन्त्री आलेसँग भेटवार्ता गरेका थिए । दबंग टुर रिलोडेडका लागि सलमान ओडीसी इन्टरटेनमेन्टको आयोजनामा हुने कार्यक्रमका लागि नेपाल ल्याउने भनिएको थियो ।
तर, सलमान सहभागी हुने कार्यक्रमको टिकट पनि उत्साहजनक रुपमा वितरण नभएको बुझिएको छ । अहिलेसम्म ७ लाख रुपैयाँको मात्रै टिकट वितरण भएको स्रोतको दाबी छ ।